0	November 18, 2017 12:35 PM
Zimbabweans elated by the prospect of change are flooding Harare’s streets.
Source: IN PICTURES: Ecstatic Zimbabweans flood Harare’s streets
A man takes part in a demonstration demanding the resignation of Zimbabwe’s president with a sign featuring deputy president Emmerson Mnangagwa in the windshield of his car. Photo: AFP
A person holds a sign featuring Commander of the Zimbabwe Defence Forces, Constantino Chiwenga as people take part in a demonstration demanding the resignation of Robert Mugabe. Photo: AFP
People carry placards and wave flags during a demonstration demanding the resignation of Zimbabwe’s president. Photo: AFP / Stringer
A woman walks past an armoured vehicle in Harare, Zimbabwe, November 18, 2017. Photo: REUTERS/Philimon Bulawayo
People carry a banner and shout slogans during a demonstration demanding the resignation of Zimbabwe’s president Robert Mugabe. Photo: AFP
A man carries a poster calling for Zimbabwe President Robert Mugabe to step down as Zimbabweans take to the streets in Harare, Zimbabwe, November 18, 2017. Photo: REUTERS/Philimon Bulawayo
Protesters gather calling for Zimbabwean President Robert Mugabe to step down, in Harare, Zimbabwe November 18, 2017. Photo: REUTERS/Philimon Bulawayo
Demonstrators hold anti-Mugabe placards and shout slogans during a protest march demanding the resignation of Zimbabwe’s president in Harare. Photo: AFP
Protesters gather calling for Zimbabwe President Robert Mugabe to step down, in Harare. Photo: Reuters / Philimon Bulawayo
A woman reacts as people march with an armored personnel carrier during a demonstration in Harare. Photo: AFP / Jekesai Njikizana
Women wave Zimbabwe’s national flag during a demonstration in Harare. Photo: AFP / Jekesai NJIKIZANA
HARARE – On the streets of the capital, Zimbabweans let their emotions run free as they spoke of political and economic change after two decades of repression and deepening hardship.”These are tears of joy,” Frank Mutsindikwa told Reuters, holding aloft the Zimbabwean flag.”I’ve been waiting all my life for this day. Free at last. We are free at last.”Some held aloft placards reading “No to Mugabe dynasty” and pumping their fists in the air in a sign of freedom.
“These are our leaders now,” said Remember Moffat, waving a picture of army commander Constantino Chiwenga and Emmerson Mnangagwa, the former vice president whose sacking this month precipitated the military intervention.